Mahazoarivo Antsirabe: Anjakazakan’ny mpanam-bola ny arabe, mangina ny Fiadidiana ny Tanàna
vendredi, 13 juillet 2018 16:48
Gaboraraka sy anjakazakan’ireo tranombarotra vaventy mpamongady tanteraka ny lalan’i Mahazoarivo iny, ary miara-miasa amin’ny mpitandro filaminana mihitsy izy ireo amin’izany.
Raha ny lalàna anefa dia misy ny ora afahan’ireny fiara veventy ireny miditra aty am-povoan-tanàna, saingy tsy voahaja izany ety Mahazoarivo fa dia miditra amin’izay ora tiany hidirany izy ireo. Tsy vitan’izay fa mameno ny sisin’arabe ireo fiara ireo ka manery ny lalana fampiasan’ny vahoaka, kanefa dia misy zotra fitanteram-bahoaka miasa amin’iny lalana iny.
Miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana sy fanelingelenana ny maro tokoa ny tranga misy. Androany zoma tokony ho tamin’ny 9 ora maraina izao dia nobahanana tanteraka tamin’ny fiarabe ny lalana. Tsy afaka nampiasana noho izany ny lalana satria dia nampidina entana teo ity fiara be ity. Voatery niverin-dalana avokoa ny fiara rehetra tokony nandalo teo amin’ity toerana ity.
Tsy misy sahy miteny satria milaza fa tsy afaka ny hiady amin’ny mpanakarena fa ny fanjakana aza mitazam-potsiny.
Mitaraina ireo mpaka mpianatra satria tery dia tery tokoa ny lalana bahanan’ireo fiarabe ireo ka mety hitera-doza ho an’ireo zaza.